Nhau - Ungasarudza Sei Yakakodzera Hove Tangi Sefa
Zvichienzaniswa nenzvimbo yechisikigo, kuwanda kwehove dziri mu aquarium yakakura kwazvo, uye tsvina yehove uye zvakasara zvekudya zvakawanda. Izvi zvinoputsa uye zvinoburitsa ammonia, iyo inonyanya kukuvadza kuhove. Iyo yakawanda marara, iyo yakawanda ammonia inogadzirwa, uye nekukurumidza iyo mhando yemvura inova. Sefa inogona kunatsa kusvibiswa kwemvura kunokonzerwa netsvina kana chirauro chinosara, uye nekunyatso kuwedzera okisijeni yakanyungudutswa mumvura. Icho chimwe chemidziyo iyo isingakwanise kushaikwa mukuita kwekudyisa.
Sefa repamusoro rinoreva kuti filtration system pamusoro petangi rehove, ichokwadiwo.
Iwo unoshanda mutemo wepamusoro kusefa ndeyekuti iyo pombi yemvura inozopomberwa mukati mefaera tangi, uye wozoyerera ichidzokera kutangi rehove kuburikidza nemhando dzakasiyana dzefaera zvinhu uye firita donje. Ipapo inoyerera ichidzokera kutangi rehove kubva pombi yekuburitsa pazasi.
1. Mutengo wakachipa
2. Kugadziriswa kwemazuva ese
3. Iyo yekutsvina kusefa mhedzisiro yakanaka kwazvo
4. Hapana chikonzero chekupatsanurwa nzvimbo
Kushaikwa kwepamusoro firita
1. Kubata nemhepo zvakanyanya, carbon dioxide iri nyore kurasikirwa
2. Inotora chikamu chepamusoro chemu aquarium, uye maitiro ayo ekushongedza haana kunaka.
3. Chikamu chepamusoro chemugungwa chinogarwa, uye nzvimbo yekumisikidza yemarambi ishoma.
4. Ruzha rukuru
Sefa yepamusoro inokurudzirwa maererano neinotevera
1. Aquarium inowanzo nyorwa nehove uye shrimp
2. Aquarium nehove hombe semuviri mukuru
Iko kushandiswa kweiyo yepamusoro firita haina kukurudzirwa kune anotevera mamiriro
1. Uswa VAT
2.Vashandisi vane hanya neruzha
Sefa yekunze inomisa iyo firita unit padivi kana pamusoro. Mvura inoputirwa mutangi rekusefa nepombi inonyudza, inosvinwa kuburikidza neyekusefa zvinhu, ndokuzoyerera ichipinda mugungwa.
1. Mutengo wakaderera
2.Sizeji diki, nyore kuisa
3. Haigare munzvimbo yekumusoro ye aquarium, uye ine yakawanda mwenje yekuisa nzvimbo.
4. Zviri nyore kutora oxygen
1. Murombo filtration maturo
2. Kubata nemhepo zvakanyanya, carbon dioxide iri nyore kurasikirwa
3. Nedanho rakasiyana remvura, panowanzo kuve neruzha rwekudonha
4. Filter zvinhu zvinoda kuchinjwa nguva nenguva.
Mafirita ekunze anoshandiswa ongororo inotevera
1. Inoshandiswa se aquarium yekurera zvirimwa zvidiki zvemumvura uye hove dzinopisa dziri pasi pe30cm
2.Vashandisi vanoda kudzora mutengo
Mafirita ekunze haana kukurudzirwa kune anotevera mamiriro
Yakakura uye yepakati saizi Aquarium
Zvakajeka zveakavakirwa-mukati mafirita
3. Okisijeni yakakwana
4. Iyo yakaiswa mu aquarium uye haina kutora nzvimbo yekunze
Kukanganisa kweyakavakirwa-mukati firita
1. Inokodzera chete diki aquarium
2. Murombo filtration maturo
3. Kune ruzha rweaeration
4. Filter zvinhu zvinoda kuchinjwa kazhinji.
5. Inokanganisawo runako rwe aquarium
Sefa yakavakirwa-inokurudzirwa kune anotevera mamiriro
Inovakwa mumasefa haina kukurudzirwa kana
Aquarium pamusoro pe60 cm
2. Uswa VAT
Sponge firita (mvura yemweya)
Sponge firita rudzi rwechigadzirwa mudziyo chinoda kubatanidza okisijeni pombi uye hosipaipi yemhepo, iyo inogona kushambadzirwa pamadziro e aquarium. Inowanzo fanirwa nesirinda diki uye inogona zvakare kushandiswa sefirita yekubatsira yemasirinda ari pakati nepakati.
Icho chirevo ndechekushandisa mhedzisiro yekuburitswa kwemvura kana iyo bubble iri mumvura ichiwedzera, iyo inogona kunyatso kupinza mutsvina uye zvakasara chirauro. Uye zvakare, mabhakitiriya ari mufaera donje anogona kunyatso kuodza organic zvinhu, nokudaro kuzadzisa chinangwa che biofiltration mune diki nzvimbo.